DMC-LZ40 Lumix Digital Camera - Panasonic
အကောင်းဆုံး ရိုက်ကူးခြင်း စတိုင်နှင့် 42 ဆ အထိ ဆွဲနိုင်သော Super Zoom
LUMIX DMC-LZ40 မှ အားကောင်းသော 42 ထိဆွဲနိုင်သည့် optical zoom lens နှင့် 20-megapixel high-resolution အာရုံခံဖြင့် ရိုက်ကူးခြင်း စတိုင် အသစ်ကို ထောက်ပံ့ပေးနိုင်ပါတယ်။ ပိုမို ကောင်းမွန်သော ဖန်တီးရိုက်ကူးခြင်းအတွက် 15 filters နှင့် P / M modes များပါဝင်သော ဖန်တီးစနစ်
အားကောင်းသော 42 ထိ ဆွဲနိုင်သည့် Optical Zoom နှင့် 22mm Ultra Wide-angle
DMC-LZ40 တွင် 42 ဆ အထိ ဆွဲနိုင်သော optical zoom (35mm camera equivalent: 22-924mm) ဖြင့် အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင် ဘက်စုံကောင်းမွန်သော LUMIX DC VARIO 22mm ultra wide-angle lens ပါဝင်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့် စွမ်းအားအပြည့်ဖြစ်သော ရှုခင်းဓာတ်ပုံများနှင့် အဝေးတွင်ရှိနေသော တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်များ သို့မဟုတ် ဌက်များအား ဓာတ်ပုံရိုက်နိုင်စေပါတယ်။ digital zoom နှင့် ပေါင်းစပ်ထားခြင်းဖြင့် ဓာတ်ပုံစွမ်းရည် ထိခိုက်မှုကို လျော့နည်းစေသည့် zoom power ကို 84 ဆ အထိ ဆွဲနိုင်စေသည့် Intelligent Zoom function အဆိုပါ 22mm ultra wide angle lens သည် စံနှုန်းဖြစ်သော 35mm camera ကင်မရာထက် ပိုမိုကျယ်ဝန်းသော မြင်ကွင်းထောင့်ကို ပေးပါတယ်။ ထို့ကြောင်း ၄င်းက စွမ်းအား အပြည့်ဖြစ်သော ရှုခင်းဓာတ်ပုံများ သို့မဟုတ် အိမ်တွင်းတွင်ရိုက်ကူးသော အုပ်စုလိုက် အလှဓာတ်ပုံများ ရိုက်ကူးရာတွင် အထောက်အကူပြုပါတယ်။
20-megapixel High-resolution CCD အာရုံခံ
DMC-LZ40 အတွက် CCD ၏ resolution အား 20-megapixel ထိ မြှင့်တင်ထားပြီး စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားသော image processing LSI သည် အရည်အသွေးမြင့် ဓာတ်ပုံနှင့် ဗီဒီယိုများကို ရိုက်ကူးရာတွင် အားကောင်းစွာ ထောက်ပံ့ပေးပါတယ်။
Expressive, Retro, Old Days, High Key, Low Key, Sepia, Dynamic Monochrome, Impressive Art, High Dynamic, Cross Process, Toy Effect*, Miniature Effect*, Soft Focus**, Star Filter** နှင့် One Point Color.
ကောင်းမွန်ပြည်စုံပြီး ပြည်လည်အားသွင်းနိုင်သော Lithium-ion ဘက်ထရီ
ကောင်းမွန်ပြည်စုံပြီး ပြည်လည်အားသွင်းနိုင်သော Lithium-ion ဘက်ထရီသည် အားတစ်ခါသွင်းထားလျှင်* ခန်မှန်းခြေ ဓာတ်ပုံပေါင်း 320 လောက် ရိုက်နိုင်သည်။ DMC-LZ40 အား AC / USB ဖြင့်လည်း အားသွင်းနိုင်ပါတယ်။
* CIPA စံနှုန်းများပေါ်တွင် အခြေခံထားပါတယ်။
ကောင်းမွန်စွာ ဆုပ်ကိုင်ထားနိုင်အောင် ဖန်တီးထားသော ဒီဇိုင်း
ကင်မရာအား အချိန်အကြာကြီး ဆုပ်ကိုင်ထားလျှင်ပင် တည်ငြိမ်ပြီး၊ သက်သာသော ဆုပ်ကိုင်မှုအား ပေးစွမ်းနိုင်ရန် ကင်မရာဒီဇိုင်းအား လုပ်ငန်းခွင်ရှုထောင့်မှု လေ့လာဖန်တီးထားပါတယ်။
တစ်ခါတစ်ရံ zoom အများကြီးသုံးပြီး ရိုက်လျှင် လက်တုန်ခြင်းကြောင့် ဓာတ်ပုံဝါးခြင်းများ ဖြစ်နိုင်စေပေမယ့် Optical Image Stabilizer ဟာ ဓာတ်ပုံအရည်အသွေးကို ပျက်စီးစေခြင်းမရှိပဲ တုန်ခါမှုကို လျှော့ချပေးနိုင်ပါတယ်။
လွယ်ကူသော ကိုယ်တိုင် ထိန်းချုပ်ခြင်း
DMC-LZ40 တွင် လက်သင်အဆင့်ထက် တစ်ဆင့်ပိုမြင့်သော ဓာတ်ပုံရိုက်သူများအား ပိုမိုဖန်တီးမှုအားကောင်းသော ဓာတ်ပုံပညာကို ခံစားနိုင်ရန်အတွက် P / M mode တပ်ဆင်ထားပါတယ်။
HDR (High Dynamic Range) mode ဖြင့် ရိုက်ကူးရန် ခက်ခဲသော အလင်းရောင်ရှိသည့် အခြေအနေများတွင်ပင် ဆက်တိုက် ရိုက်ကူးထားသော ဓာတ်ပုံများအား whiteout (over-exposure) သို့မဟုတ် blackout (under-exposure) မဖြစ်စေပဲနှင့် စုစည်းထားသော ဓာတ်ပုံတစ်ပုံတည်းဖြစ်အောင် ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
720p HD Video ရိုက်ကူးခြင်း
DMC-LZ40 သည် စွမ်းအားပြည့်ဝသော HD ဗီဒီယိုများကို Motion JPEG တွင် 1280 x 720p ဖြင့် ရိုက်ကူးနိုင်ပါတယ်။ ရွေ့လျားဓာတ်ပုံများကို ကင်မရာထိပ်တွင်ရှိသော ရွေ့လျားဓာတ်ပုံခလုတ်ကို တစ်ချက်နှိပ်ခြင်းဖြင့် စတင်နိုင်ပြီး ထိုသို့ပြုလုပ်ခြင်းသည် ဓာတ်ပုံ ဗီဒီယို ရိုက်ကုးခြင်းကို ချက်ချင်းပြောင်းလဲရန်အတွက် ဓာတ်ပုံရိုက်သူများကို အဆင်ပြေစေပါတယ်။ Zoom ပြုလုပ်ခြင်းသည် အဝေးတွင်ရှိသော အရာဝတ္ထုများကို ဆွဲပြီးကြည့်ရှုစေနိုင်ပါတယ်။
DMC-LZ40 တွင် သင့်တော်သော exposure ရှိသော အလွန်ဝေးကွာတဲ့ အကွာအဝေးတစ်ခုက အရာဝတ္ထုများကို ရိုက်နိုင်စေသည့် built-in GN8.5 equiv. flash ပါဝင်ပါတယ်။
Panasonic နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ထားတဲ့ Intelligent Auto mode သည် အသုံးပြုရ အလွန်လွယ်ကူပြီး လွဲချော်သွားသော ရိုက်ချက်များကို လျှော့ချပေးပါသည်။ အဆိုပါ စနစ်တွင် အလင်းဓာတ်ပုံ တည်ငြိမ်အောင်ပြုလုပ်ပေးခြင်း၊ မျက်နှာအား အာရုံခံခြင်း၊ နောက်ခံမြင်ကွင်းအားရွေးပေးခြင်း အားလုံးကို ပေါင်းစည်းထားခြင်းဖြစ်ကာ ကင်မရာမှ ၄င်းတို့အားလုံးကို ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်သောကြောင့် သင့်အနေဖြင့် ဓာတ်ပုံရိုက်ချက်များကိုပြုလုပ်ရန်၊ ဓာတ်ပုံရိုက်မည့်အရာအားချိန်ရန်နှင့် ရိုက်ရန်အတွက် ထိုဆောင်ရွက်ချက်များကို ပြုလုပ်ရန်မလိုတော့ပါ။
3.0 လက်မရှိသော ကြီးမားသည့် 460K-dot LCD သည် မည်သည့်အလင်းရောင် အခြေအနေမျိုးမှာမဆို မြင်ကွင်းပြတ်သားမှုရရှိသည်ကို အာမခံနိုင်သောကြောင့် ရိုက်ပုံရိုက်ခြင်းနှင့်ရော ရိုက်ပြီးသားဓာတ်ပုံများကို ပြန်လည်ကြည့်ရှုခြင်းအတွက်ပါ အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်ပါသည်။